Modular waste processing plants "PROMETHEUS-FERMER". Fandrafetana KB Klimova.
Ny tanjon'ny fambolena famokarana modules "PROMETHEUS-FERMER".
Ny orinasa modular PROMETHEUS-FERMER dia noforonin'ny biraom-panorenana Klimov (INN 4205312946 Russia, Kemerovo, www.potram.ru) ary natao mba hampandehanana ny fanarenana ny paik'ady ara-teknolojika ho an'ny fanodinana fitaovam-pako (alim-bary, fako mahery, fako ary fako) kalitao ara-barotra avo lenta, hafanana ary herinaratra. Ao amin'ny zavamaniry "PROMETHEUS-FERMER" koa dia azo atao ny manara-jiro mineraly, tavoahangy.
Ny zavamaniry "PROMETHEUS-FARMER" dia tafangona noho ny fototra "FERMER" pyrolysis unit. Amin'ny modely dia azo atao ny mametraka komposta teknolojia samihafa miaraka amin'ny fahaiza-manao 8 taonina ka hatramin'ny 100 taonina isan'andro. Ny zavamaniry PROMETHEUS-FARMER dia novolavolaina ho an'ny sehatra samihafa, toy ny fitaovam-pahavoazana (fako, sokatra, siramamy, shale) ary vokatra farany (coke, solika ary grefy, herinaratra).
Famindrana ny orinasa madinika "PROMETHEUS-FERMER" ho an'ny mpividy, manendry sy manofana mpiasa.
Ny fototra dia manana rafitra Modular. Ary hamonjy ny mini-fototra "Prometheus-MPAMBOLY" na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, mba hitaterana ny manontolo fototra Feno hipoka ho iray dranomasina 40-tongotra fitoeran-javatra (marika-Trailers: Dry Van 40 'DV, High Cube 40' HC, High Cube Pallet Wide 40 'HCPW). Rehefa tonga ny fitaterana boaty ho any amin'ny toerana, ny mini-orinasa mandeha eo ambany fanaraha-mason'ny manam-pahaizana Klimov 2 Design Bureau ary vonona ny hiasa ho 5 andro fiasana. Staff sy ny fiofanana voalohany fiasan'ny ny zavamaniry famokarana dia tanterahina eo ambanin'ny mitokana fifanarahana eo ambany fanaraha-mason'ny manam-pahaizana Klimov 2 Design Bureau nandritra ny 5 andro fiasana.
Raha voafidy ny halehiben'io lamina io mba hahafahana mametraka azy any amin'ny toerana fametrahana ny orinasa "PROMETHEUS-FARMER" amin'ny fampiasana ny sotro sy ny lalamby iraisam-pirenena. Izany no mahatonga ny PROMETHEUS-FERMER manamboatra tranobongotra haingana na aiza na aiza manerantany.
Fitomboan'ny endri-javatra ny mini-fikosoham-bary "Prometheus-MPAMBOLY" fa ny dingana voalohany fitaovana tratran'ny madio vonona Ndao mitombo antoka, ary ny hangar dia haorina Nivoaka faingana ihany no mampiasa fifandraisana manodidina ny dingana fitaovana tsoavaly. Izany dia mamela anao hamorona orinasa mpamokatra entana lehibe kokoa manovaova manerana ny tetikasa fanavaozana ho an'ny hoavy. Raha ilaina, hangar misy sehatra azo esorina eo an-toerana, tsy mampiasa welding, tsy handringana ny fiangonana ankapobeny sy miova araka teknolojia ilaina. Toy izany endrika mampiavaka ny fiangonana, dia ny mini-fikosoham-bary "Prometheus-MPAMBOLY" na dia eo aza ny isan'ny rihana ny trano rafitra, mamela ny disassemble in mifanohitra mba ny rehetra teknolojia sarotra revo amin'ny fitoeran nitaingina tamin'ny vaovao toerana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao nandritra ny andro vitsivitsy tsy ny fampiasana ny welding asa.
Fametrahana ny orinasa fanodinana fako "PROMETHEUS-FERMER"
Fa fandoroana fako
Mba hahazoana solika sy fingotra
Bozaka sy loto ary electro-
orinasa Prometheus-MPAMBOLY PLUS
orinasa Prometheus-MPAMBOLY PLUS-2
20 taonina isan'andro
50 taonina isan'andro
75 taonina isan'andro
100 taonina isan'andro
Amin'ny alalan'ny fitaovana maoderina:
Andiany maro ho an'ny fanodinana karazana varotra samihafa:
• Subgroup-01 - ho an'ny fanodinana MSW;
• Subgroup 02 - ho an'ny fanodinana ny kodiarana nampiasaina;
• Subgroup 03 - noho ny hazo fanodinana fako, lignin;
• Subgroup-04 - ho fanodinana ny arina, shale;
• Subgroup 05 - noho ny fanodinana ny peat, sludge fako fitsaboana fototra;
• Subgroup 06 - fa plastika fanodinana;
• Subgroup 07 - noho ny fanodinana ny menaka nampiasaina maotera;
• Subgroup 08 - ho an'ny fanodinana ny solika;
• Subgroup-09 - ho an'ny fanodinana solika solika, tar, ranon-tsolika mavesatra;
• Subgroup-10 - ho an'ny fanodinana solika, gas condensate.
Fampisehoana ny zavamaniry PROMETHEUS-FARMER.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА и ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ модульных пиролизных заводов "ПРОМЕТЕЙ".
Fanodinana plastika plastika amin'ny komplex PROMETHEUS amin'ny pyrolysis.
Fanolorana fanomezana ara-barotra amin'ny arintany amin'ny solika, hafanana, herinaratra.
Tolotra ara-barotra ara-barotra amin'ny toeram-pitsaboana fitrandrahana solika amin'ny alalan'ny herinaratra sy ny solitany.
Ny tombony amin'ny famolavolana modules "PROMETHEUS-FARMER"
Ny fitaovana maimaim-poana ny zavamaniry modules "PROMETHEUS-FARMER".
Ny tombony ho an'ny tombontsoa dia ny hoe tsy hivoaka ny loharanon-tsakafo raha tsy misy ny sivilizasiona. Tsy tena misy ny asan'ny olona tsy misy dikany. Ireo karazan-tsakafo ireo no ambany indrindra amin'ny vidiny, ny vokatra avo lenta avy amin'ny "tsy ara-dalana" dia tsy mitaky fitrandrahana manokana.
Tombontsoa mifototra amin'ny zavamaniry modules "PROMETHEUS-FERMER".
Ny zavamaniry modules rehetra dia natao tamin'ny sehatry ny fizaran-javatra, mora hita eo amin'ny habeny amin'ny lalamby 20 metatra sy 40 metatra.
Tsy misy fototra iandraiketana ireo toeram-pambolena, vita amin'ny fototra, izay ahafahana mampihena ny vidin'ny orinasa. Ny fototra azo ampiasaina dia mety farafahakeliny amin'ny vidin'ny fitaovana na ny orinasa iray manontolo.
Ny orinasa modular sy ny sehatra dia napetraka amin'ny fomba maharitra, izay mampihena be dia be ny fampiasam-bola tokana amin'ny famarotana ny orinasa. Na dia eo am-pikarakarana ireo modules manaraka aza, dia efa manome fiantraikany ara-toekarena amin'ny orinasa ny voalohany. Noho izany, azo atao ny manatsara ny fampiasam-bola imbetsaka. Ny fampitomboana sy ny fampihenana ny famokarana ao amin'ilay orinasa dia mora atao amin'ny famolavolana ny tsena.
Ny zavamaniry modules dia mora simba noho ny fandrosoana siantifika sy teknolojia. Tsy mampidi-doza izany raha mbola ampiasaina ny orinasa, ary efa miala sasatra ny teknolojia. Ary ny fanavaozana ny fizarana orinasa na ny fivorian'izy ireo dia tsy manakana ny asan'ny orinasa iray manontolo.
Ireo fizarana ao amin'ny orinasa motera dia tsy maintsy atomboka amin'ny fisorohana fikomiana ho amin'ny fikojakojana, tsy mandeha ny famokarana orinasan'ny orinasa.
Модульные заводы могут при необходимости перемещаться, что не возможно при стационарном заводе.
Быстрое развертывание модульных заводов на любой местности.
Технологические преимущества модульных заводов «ПРОМЕТЕЙ-ФЕРМЕР».
Azo ampiasaina amin'ny alalan'ny fitaovana maoderina ny famoronana zavatra ara-teknolojika momba ny fanodinana solika sy ny fanodinana ny fako.
Ny teknolojia fanodinana rehetra dia voafaritra sy voatantara ao amin'ny tranonkala: www.potram.ru
Ny orinasa PROMETHEUS-FERMER dia teknolojia tsy manam-paharoa amin'ny fanodinana fako mafy.
Ny orinasa PROMETHEUS-FERMER dia zavamaniry samihafa. Araky ny dikan-teny dia azo atao ny mamokatra angovo, solika, hafanana ary herinaratra matanjaka sy solika, nefa tsy mandoto ny tontolo iainana sy ny fampirimana mampidi-doza ao anaty rivotra.
Ny tranokala dia finday ary tsy mifamatotra amin'ny tany, amin'ny fotoana rehetra dia azo rava ny orinasa PROMETHEUS-FERMER ary hita any amin'ny toerana hafa.
Ny famolavolana "PROMETHEUS-FARMER" dia manana endrika modely, izay ahafahana mampitombo ny volam-pamokarana tsy misy vola be.
Ho an'ireo dikan-teny amin'ny PROMETHEUS-FERMER rehetra dia ilaina ny fako, izay tsy mitaky fanodinana manokana, d. Afaka avela handratra fako nefa tsy misy vola be.
Ny famolavolan'ny zavamaniry "PROMETHEUS-FARMER" ho an'ny fahazoana fitaovana synthetic dia ahafahanao mahazo karazana solika samihafa.
Ny tombony ara-bola sy ara-toekarena amin'ny zavamaniry modules "PROMETHEUS-FARMER".
Fanamboarana haingana ny zavamaniry modules.
Fanamarinana goavana amin'ny fametrahana modules - tsy mihoatra ny 6 volana hatramin'ny fanombohan'ny fananganana.
Tombontsoa be amin'ny fampiasana teknolojika amin'ny fametrahana modules - 100 hatramin'ny 300 isan-jato.
Vidiny ambany amin'ny fampiasana solika.
Famerenana ny fako amin'ny vidiny ambany.
Vidiny ambany ho an'ny solika matanjaka synthetic.
Fandinihana manokana momba ny zavamaniry "PROMETHEUS-FARMER" miaraka amin'ny teknolojia hafa.
Ny teknolojia ho an'ny fampiasana sy fanodinana ny fako ao an-tokantrano amin'ny alalan'ny fanodinana ny fako (fitaovam-pako) ho an'ny fitambaran'ny singa fototra: gas, liquid, solid. Mamela ny fampidinana ireo fepetra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tontolo iainana fa tsy mandoro, ohatra, ny fandoroan-trano na ny pyrolysis ambany. Ny zavamaniry PROMETHEUS-FERMER dia tsy manimba ny tontolo iainana, araka ny voalazan'ny Laboratoara iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana any Kanada, Toronto. Fandalinana lalina momba ny asan'ny orinasa PROMETHEUS-FERMER an'ny Akademian'ny siansa any Vietnam, Hanoi. Mifototra amin'ny vokatry ny fanatsoahan-kevitr'ireo Akademian'ny siansa ao Vietnam amin'ny fandefasana ireo zavamaniry "PROMETHEUS-FARMER" ho fampidiran-dresaka manerana an'i Vietnam.
Ny fametrahana mitovy amin'izany dia manome hery herinaratra sy herinaratra, saingy tsy mitovy amin'ny orinasa "PROMETHEUS-FARMER" dia tsy voaisa amin'ny fandraisana solika.
Ny fametrahana ny fifaninanana dia mivantana mivantana eo amin'ny toerana fampiasana ary tsy afaka averina aty aoriana any an-tsaha. Ny famotehana ny fametrahana dia asa goavana sy mitaky vola be.
Ny habetsaky ny famokarana dia voafaritra eo amin'ny dingan'ny fampiroboroboana ny tetikasa. Raha ilaina ny hampitombo ny habetsaky ny akora vita amin'ny varimbazaha na ny karazany, dia ilaina ny fametrahana fametrahana vaovao na fanavaozana fitaovana maharitra maharitra.
Ny ankamaroan'ny fametrahana dia natao hikajiana voly fotsiny.
Ny fametrahana ny MSW ho an'ny karazana angovo sasany. Tsy azo atao ny famerenana haingana.
Hatramin'izao, ny vidin'ny orinasa "PROMETHEUS-FARMER" dia avo roa heny amin'ny vidiny, ary avo roa heny noho ny famokarana angovo mitovy amin'izany any Shina.
Ny fiheverana ny fampiasana ny zavamaniry bitika modules "PROMETHEUS-FARMER".
Fampitomboana ny haavon'ny asa fanodinana fanao isan-taona.
Famoronana ny tetikasa any amin'ireo faritra samihafa ao amin'ny Federasiona Rosiana sy any amin'ny firenena manerana izao tontolo izao.
Fampitomboana ny jeografika momba ny vokatra vokarina ao anatin'ilay tetikasa.
расширение базы исходного сырья.
Famoronana toeram-piantsenan'ny sela ho an'ny fanontana samihafa voalohany.
Fananganana toeram-ponenana an-tokantrano tsy miankina, ho ampiasaina amin'ny sehatry ny tranobe.